Ini angaziva sei FSX shanduro yakaiswa pa-computer yangu? FSX-SP1, SP2 kana Yechipiri?
Kuziva shanduro FSX ari yakaiswa pa-computer yako, zviri nyore: Start FSX, uye vanotanga nendege kwose uchida, pamwechete chero ndege zvaunoda. Zvino, ari pamusoro nechidzitiro wako, svinudzai Muterere kamwechete (kana kwete kare akazarura) uye tinya «Help» kurudyi. Pano, tinya «About». Anotevera hwindo rinowanika vane shanduro renyu FSX: